Madaxweyne Farmaajo oo u amba baxay dalka Uganda. | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Madaxweyne Farmaajo oo u amba baxay dalka Uganda.
Madaxweyne Farmaajo oo u amba baxay dalka Uganda.
Wafddigan oo uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u amba baxay Dalka Yugandha.
Ujeedada socdaalka Madaxweynaha ayaa la xiriirta ka qeybgalka shir Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda maalinta berito ah oo taariikhda ku beegan tahay 2-bisha March 2018 ka furmaya,kaasi oo fursad u siinaya in laga xaajooda Xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya.
Wafddiga madaxweynaha Soomaaliya oo ay qeyb ka yihiin mas’uuliyiin kaladuwan ayaa inta uu joogo Dalka Yugandha wuxuu la kulmaya hoggaamiyaasha wadamada ciidamadooda Jooga Soomaaliya,isagoo kala hadlidoona howlgalka ka dhanka ah Alshabaab.
Dhanka kale War ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Uganda ayaa lagu sheegay in Shirka ay isugu imaanaya madaxda Dowladaha ay Ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya gaar ahaan Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM.
Shirka ayaa inta uu socdo diirada lagu saari doono qaab gunaanadka shirkii bishii September ee sanadkii 2017-dii lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareynkanka,waxaana shirka New York uu ahaa mid la isku aragti dhaafsanayay Xaaladda Soomaaliya,Mustaqbalka Ciidamada Midowga Africa ka jooga Soomaaliya ee AMISOM iyo waliba hanaanka Kumeel gaarka ah ee Ciidamada Dowladda Soomaaliya kala wareegi karaan amaanka guud ahaan dalka Ciidamada AMISOM.
Previous articleAl-shabaab oo dilay Dameero u rarnaa ganacsatada Waajid.
Next article Ra’iisal Wasaare kuxigeenka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dowladda Britain u fadhiya Soomaaliya.